ဦးဂင်ကြီး: သမီးကြီး မွေးနေ့
Posted by ဦးဂင်ကြီး at 3:02 AM
quine, January 8, 2009 at 5:10 AM
ဒီနေ့ နံနက်ခင်းရဲ့ အလင်းရောင် မတွေ့ခင်မှာ ကြည်နူး အားရစွာနဲ့ မုဒိတာ ပွားမိပါရဲ့ ။
အကြောင်းကတော့ ရဲဘော်ကြီး ဦးဂင် ရဲ့ သမီးကြီးပေါ့အိုင်း ၏ (၁၀)နှစ်မြောက် မွေးနေ့ အလှူပွဲလေး ကြောင့်ပါ ။
ပြီးတော့ လင့်ခ် ပါ ချိတ်ထား ပေးတဲ့အတွက် မိဘမဲ့ကလေးငယ်များရဲ့ ဘဝတွေကို မသိသေးတဲ့ သူတွေ သွားရောက် ခံစားနိုင်တာပေါ့ ဗျား။
သာဓု သာဓု သာဓု ...... ပါ ဗျား...။
“ဟူး”....... ကျနော်လည်း မွေးနေ့ ရောက်ခါနီးပြီ။
ဦးဂင် ရေ .............
M.Y., January 8, 2009 at 5:19 AM
တကယ်တော့ မိဘမဲ့ဆိုတဲ့ စကားလုံ၊းကိုက လူသားမဆန်လွန်းတာပါ။ဒီကမ္ဘာပေါ်မှာမရှိသင့်တော့ဘူးထင်တာပဲ..
Craton, January 8, 2009 at 5:25 AM
ကလေးလေးတွေကို ချစ်လိုက်တာဗျာ..။ သနားပါတယ်။
thorn musem, January 8, 2009 at 6:07 AM
သမီးကြီးမွေးနေ့ ကို ဖတ်ပြီး ကြည်နူးစိတ်နဲ့ မုဒိတာပွားမိပါတယ်..အသက်ငယ်ပေမယ့် ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ရင်ထဲမှာ ဒီလို လူသားဆန်တဲ့ စိတ်ကလေး ဖြစ်တည်ကိန်းဝပ်နေတာကို ဂုဏ်ယူချီးကျူးပါတယ်..။
ကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှုကို ကလေးချင်းက ပိုမြင်နိုင်ပါတယ်..။
သမီးပေါ့အိုင်း ၁၀နှစ်မြောက်မွေးနေ့ မှ နှစ်၁၀၀တိုင် ကိုယ်ချင်းစာစိတ်နဲ့ အလှုတွေပေးနိုင်ပါစေလို့ ...
Upasaka, January 8, 2009 at 6:09 PM
မိဘမဲ့တဲ့ ဒီစကားကိုကြားတိုင်း ကျနော် မျက်ရည်ကျတယ် ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကမှ မိဘမဲ့ မဖြစ်ခဲ့ ဘူးပေမဲ့ မုဆိုးမသားဆိုတော့ ဒီဘ၀တွေကို နား လည်တယ် ဒီတော့ ရင်ခွင်မဲ့တွေရဲ့ အသိုက်အမြုံတွေအတွက် ကျနော့် လက်တွေစွမ်းသမျှလုပ် ခဲ့တယ်။
သမီးကြီးရေ ဘ၀တလျှောက်လုံး ငြိမ်းအေးပါစေ
ဒီကောင်းမှုကို လည်းဦးဦးသာဓုခေါ်ပါတယ် နော် သမီး
Thee Lay Thee (NC), January 12, 2009 at 5:24 PM
Ma Ma Pao Ai,
Happy Birthday and proud of you doing good job.
Cho Yee Phyo
mirror, November 14, 2009 at 12:27 AM